Usuku My Pet » Dating – Ingabe balimaze Yourself?
Igcine ukubuyekezwa: uJan. 21 2021 | 5 imiz ufunde
"Ngiyakuzonda abapholayo" kuyinto comment I ukuzwa abesifazane zami amaklayenti ezivame. Lesi simo sengqondo ophambene yokuqomisana esinye sezizathu eziyinhloko abesifazane abangashadile bangahlala 'wanamathela' futhi single for eside kangaka. Iningi labesifazane ngihlangana in coaching practice indlela yami nithandana ngayo ngokuphelele okungalungile ingqondo isethi, okusho ukuthi indlela besondela nithandana ngempela sabotages amathuba abo lokuhlangana umlingani wabo wokuphila.
Nokho lesi simo sengqondo kuyaqondakala ngokuphelele. Sike waba khona, 'Ukuphoqa' ngokwethu ukuze uthole in the game, ukubhalisela i-inthanethi ukuphola sites, trawling ngemiyalezo ngezinye izikhathi ukwenza ukukhasa isikhumba, futhi ngokuvamile emadodeni ashadile nezinye abangathandeki, futhi ekugcineni umuntu ithuba ngoba ubukeka nice. Making contact, chatting emuva naphambili, mhlawumbe ngisho isiqala ukuba uthole kulokolokoza injabulo - okubonakala nice, yena okuhle ngempela ngifuna izithombe futhi kukhona ukuxhumana esiqondile. Ngakho uhlele umhlangano. Wena kwemizwa, uchitha isikhathi esiningi namandla ukuzilungisa, uyazibuza wenza iphutha, kodwa wenze umzamo, babedonsa coat yakho, phumelani amakhaza futhi bahambe uye nomaphi (amahora ngokuvamile abaningana ngisho) ukuhlangabezana usuku lwakho. Uzizwa ejabulile manje, phela kungaba 'lowo'.
Futhi ke ukumbona! Inhliziyo yakho lehla ngoba kubukeka LUTHO like izithombe zakhe, empeleni more 'Shrek' kunalokho 'Becks'. Muhle hambo mfushane kunaye uthe, futhi lezo zithombe kwacaca ezathathwa eminyakeni eminingana edlule ukwahlulela by the weight extra kanye nokuntuleka elikhethiwe izinwele! Kodwa wena ongakwazi ukuxazulula ukuba 'zama' ukuba amnike ithuba, I mean weza yonke indlela lapha! Kukhona mayelana uzibuthe okuningi njengoba wena ubungazizwa kanjani nge iklabishi Soggy futhi ngokushesha uqale ukuhlela indlela yakho. Kodwa ungafuni ukuba bangahloniphi ngakho ahlale ihora okubuhlungu of sezimiso, ingxoxo ngenhlonipho usho okuthile lutho okuningi, futhi sonke isikhathi wena Ukulunywa nje uthole away. Uxhumano elalilapho Internet zikuphi futhi wena ngokucacile kokubili ukuzizwa ngingakhululekile. Njengoba ushiya emvuleni uzibuze ukuthi kungani wena wachitha isikhathi, imali nomzamo ukuza ngolunye usuku futhi amabombo ekhaya ukudangaliswa ngisho nangokwengeziwe lizimelele ngenkolelo ukuthi kukhona nje ababona amadoda ehloniphekile out khona kuwe! It no wonder abesifazane get up fed.
Dating can ukungajabuli futhi kulula ukuthola demotivated. Kungaba uzizwe nkinga ngisho inhliziyo kubuhlungu ukuba baqhubeke intambo izinsuku nabantu ukuthi uzizwa akukho inhlansi nge, futhi babe amathemba akho lokuhlangana umlingani ashabalala ngokuphindaphindiwe. Kukhona ingozi nokutubeka uma nenza okuningi ukuphola abanye abesifazane bangaba baphikise kakhulu ngisho jaded. Lokhu ngeke kusize isimo sakho ngaso sonke ngoba lapho yena kule modi, wesifazane ongashadile kungaba kalula miss wakhe Mr Right ngokuphelele lapho ifika kanye.
Ingabe bewazi ukuthi abesifazane abaningi empeleni fancy umuntu ukuthi kamuva uye ukushada lapho beqala ukuzwa ukumhlangabeza? Interesting! Ucwaningo lwamuva e-The Daily News ulinganisela ukuthi azungeze 22% of imibhangqwana ukuhlangabezana ngomsebenzi. Lokhu akwenzekanga ngengozi – kungenxa yokuthi ukukhangana ovunyelwe ukwakha ngokwemvelo, ngokuhamba kwesikhathi. Futhi ezimweni eziningi ngokuvamile umuntu ukuthi wawungeke ithuba ukube wahlangana naye online, okuthile bakhumbule njengoba usuke bazama ukuhlanganisa emidlalweni yakho.
Ngakho yini ukwenza ke ukushintsha lo muzwa ophambene ngezothando?
Well eqinisweni a shift elula ngombono konke okudingekayo ukuguqula yonke nakho dating for wena, ukuze ungakwazi empeleni ukuqala awujabulile, futhi ungabiza kumuntu wakho okuningi ngokushesha. Uma abesifazane ungaqala yokubuka dating njengoba 'practice fun'Ziyophumelela okuningi, futhi ibuye ziyojabulela inqubo okuningi. Ngakho yini ngempela 'practice fun'Kusho?
Lezi AMACEBISO TOP uzokutshela kanjani ukusebenzisa 'practice fun ' Indlelanchubo for impumelelo.
Ungacabangi ngaye njengoba umlingani ezingase zivele ekuphileni, esikhundleni kube nje abakhona njengamanje kanye lo muntu omusha futhi abe nelukuluku ngaye. It nje usuku – akukho isithembiso ubuhlobo noma umshado - kungcono nje ikhofi, noma a walk kumbe noma yini eniyenzayo ndawonye. Izinzuzo lapha ikabili, Okokuqala kuzothatha kokucindezela off ukuze ukwazi kokubili uphumule, futhi uyozizwa ukuthi. Amadoda Iningi ezinhle ngabomvu usuku lokuqala futhi musa avela okusemandleni abo, Nokho lokhu kuzosiza wambeka bakhululeke. Okwesibili uthola ukuzijayeza nokuba phakathi zamadoda onjengawe, okusho ukuthi ukuzethemba kwakho ukhuphuka, futhi lapho 'umuntu wakho' liyabonisa up usukulungele ngaye ngoba baye baba 'yemvelo'.
2. Gcina nezinsuku kokuqala esifushane kakhulu.
Musa ukwamukela nezinsuku dinner for the Izinsuku ezimbalwa zokuqala ngoba made kakhulu ukuchitha nomuntu awazi. Ihora isikhathi ngasinye inala ukuchitha on the mbhangqwana wokuqala yemihlangano. IDemo and impactful yilokho siyaphi for lapha. Lokhu kuzosiza kakhulu ukuvimbela nokutubeka ngenkathi othandana naye abantu abaningana ngesikhathi esisodwa ekuqaleni.
3. Musa ukuxhumana kulayini nabantu abahlala kude kakhulu ezivela kuwe.
Lokhu kusindisa a lot of energy benhliziyo. Yiba rule to date abantu kuphela abayizisulu wendawo kuwe (ngaphakathi travel ibanga eziqongweni ngehora). Iningi sites online abe isici lapho kungacwengisisa search yakho Imiphumela kuphela zihlanganisa abantu ngaphakathi ibanga elithile. Khumbula awazi empeleni wazi othile uze uhlangana nabo umuntu, ngakho ngokuvamile online nokuxhumana nje akekho lapho uhlangana ubuso nobuso. Ngiphinde khulumela umuntu eya wesifazane dates.
4. Nokujabulela usuku. Kujabulele!
Qaphela – lokhu akusho baphuze iloli eligcwele utshwala! Nakuba I do baqonde ukuthi kungani abantu abafana nesiphuzo ngosuku lokuqala kungcono ukuba ziyeke impela noma anamathele kwenye nje ngosuku lokuqala ukuze ukwazi ngempela ukuhlala kucace ephethwe ubone indlela ozizwa ngale date, ngaphandle utshwala enikeza izinto Tint kamnandi. Kunalokho ubone uma ungakwazi ukuthola okuthile okuthakazelisayo ngaye, wonke unokuthile!
5. Inike ithuba.
Lokhu kusho ukuthi uthola usuku lwesibili uma icela enye, inqobo uzizwa ephephile naye. You amnike lokhu ithuba noma kunjalo ungenawo ukhangeke kuye. Yebo NGEMPELA! Lokhu kuyingxenye ebalulekile yenqubo, ikakhulukazi abesifazane abanombono isibonelo ubudlelwano ezimbi futhi amadoda ukukha abangavumelani okuhle kubo.
6. Ake kuye kuholele
Konke lokhu kuyingxenye ndlela yami jikelele abesifazane abafuna obujabulisayo. Ngakho lokho kusho yena oyobe ukucela usuku lwesibili, uma kukhona ukuba ngomunye. Ngiphinde ezikhuthaza ukuthi ukhokha ngoba lokhu kusiza wamisa ubuhlobo ashukumisayo efanele, nakuba ngiyaqonda lokhu impikiswano abanye abantu. Ladies ofuna ukuba adunyiswa ilungelo?
7. Prakthiza ukwethembeka okuphelele mayelana nendlela uzizwa.
Uma wena izinsuku la madoda uthembekile futhi wena usho kanjani wena uzizwa, ngisho noma lokhu kunzima ukukwenza ngakho ekuqaleni. Ngakho uma uzizwa nesithukuthezi / nervous / ivaliwe / interested / ejabulile ungakwazi ukuveza ukuthi. Not in a way bitchy, ngendlela nokwethembeka. Lokhu wesabeka abanye abesifazane, futhi uzomangala ukuthi amadoda abaningi kuzothatha it in igxathu yabo futhi bazise ukwethembeka. Plus isivulela ngempela, nokukhulumisana, futhi kumnika impendulo okuyinto ithuba legolide ukuba alungise nokuqinisa game yakhe kuwe (uma ucabanga zinkulu – okuyinto wena).
8. Yiba nomusa, abanentshisekelo kanye esinenhlonipho.
Ungase ungacabangi nguye umuntu wakho ekahle kodwa wabonisa up for wena futhi abakuphatha ngosuku, futhi okufanele ukwazisa.
Ukufihla ngale ndlela ngeke kukusize kuphela ukujabulele more, kodwa kuyokusiza ukuba uqinise yakho 'ubuhlobo muscle' ngoba uzothola ukuzijayeza kokuba wena (a strong, Owesifazane feminine) azungeze amadoda angempela. Futhi ngenkathi wenza konke lokhu umuntu wakho izovela uma wena kancane lindela it!
Landela lezi amathiphu top ukuphola ubone indlela dating yakho isipiliyoni siguqule ngokuphelele.